RaceandHistory.com - Zimbabwe Watch - Zimbabwe: Humanitarian Situation Linked to Sanctions
Zimbabwe: Humanitarian Situation Linked to Sanctions
Because the colonialists and imperialists have actively engaged in both our physical and mental oppression, the web of deception created by their liberal camps and networks is a crucial and deadly weapon if we are not prepared for the onslaught and attacks.
The manner in which the United States and British media have reported how cholera is spreading in Zimbabwe not only reveals they enjoy watching a people whom they cannot intimidate and control suffer, but even, more importantly, it is clearly a masquerade by supposedly compassionate human beings who have nothing to do with the problem.
This task force is jointly convened by the United States Holocaust Museum, American Academy of Diplomacy and the US Institute of Peace which is directly funded by the US Congress. The timing of the "Elders" decision to visit Zimbabwe and the rest of its founding membership pool should arouse suspicion which force the masses of Zimbabwe and the rest of Africa, who are obviously tired of the West meddling in our political affairs, not to be mislead.
South Africa rallies behind President Mugabe December 11, 2008
Zambia not planning a military invasion of Zimbabwe—Pande December 10, 2008
Zambia dismisses military action report December 10, 2008
South Africa dismisses call for Mugabe ouster December 10, 2008
Tsvangirai now in a political cul-de-sac December 10, 2008
Former SA President Thabo Mbeki was spot on when he reminded the MDC-T leader that he had nothing to gain from his grandstanding in the West, except acres of media space. At the end of the day he would have to return to Zimbabwe to face his vowed "enemies".
South Africa is not "pressurizing President Mugabe to step down" December 10, 2008
Tanzania rules out military intervention on Zimbabwe December 10, 2008
AU rejects call for troops in Zimbabwe December 10, 2008
The African Union has dismissed as "not logical" calls by the Prime Minister of Kenya, Raila Odinga and activist Archbishops, Desmond Tutu and John Sentamu, to send troops to Zimbabwe to topple President Robert Mugabe.
Africa says no to military intervention December 10, 2008
Zim not threat to international community - Dr Ndlovun December 10, 2008
Dr Ndlovu said the move by western countries to use the current cholera outbreak as an excuse to invade the country will not be tolerated.
Azapo describes Tutu's call for intervention in Zimbabwe as irresponsible December 08, 2008
A former South African anti-apartheid organization, Azapo has described Archbishop Desmond Tutu's call for intervention in Zimbabwe as totally irresponsible.